जसपालाई प्रधानमन्त्री – के भन्छन् काँग्रेस–माओवादी ? विपक्षीका दुई विकल्प , जसपालाई नमाने संसद विघटन ? – Nepalpostkhabar
जसपालाई प्रधानमन्त्री – के भन्छन् काँग्रेस–माओवादी ? विपक्षीका दुई विकल्प , जसपालाई नमाने संसद विघटन ?
नेपालपाष्ट खबर । ६ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १२:३४ मा प्रकाशित
काठमाडौं – सत्ता समीकरणको ‘किङमेकर’ मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) यतिबेला फेरि राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ । जसपाका नेताहरुमा देखिएको आपसी सहमतिका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र होइन, विपक्षी गठबन्धनसमेत अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
जसपा अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवले एमाले वा काँग्रेस दुबैलाई नसघाउने सहमति गरेका छन् । तर, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आएमा जसपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने उनीहरुबीच सहमति जुटेको छ ।
काँग्रेसका दुई विकल्प स् जसपालाई मान्ने कि ओलीलाई ?
जसपाले नसघाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सामु दुईवटा प्रश्न तेर्सिएका छन्– जसपालाई प्रधानमन्त्री बनाउने या ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने ?
ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन काँग्रेसले अग्रसरता लिए पनि प्रतिनिधिसभाले विकल्प दिन नसकेको निधिको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मेरो बुझाइमा संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै मुलुक निर्वाचनतिर जाँदैछ ।’
कसको नेतृत्वमा चुनावमा जाने भन्नेबारे संविधानको धारा ७६९५० मा प्रवेश गरेपछि थाहा हुने लेखकले बताए । जसपाले जसको नेतृत्वमा पनि चुनावमा जान चाहेको लेखकको तर्क छ । उनका अनुसार राष्ट्रिय सरकार र आफ्नो नेतृत्वको सरकार भनेर अर्को सरकारको सम्भावनालाई जीवित राखेकाले ठाकुर–यादवको विज्ञप्तिको मूलतत्व निर्वाचनमै जाने हो ।
‘उहाँहरु (ठाकुर–यादव) ले सरकार गठन गर्ने कुरा सरकार पक्षको समर्थनमा हो कि विपक्षीको समर्थनमा हो रु त्यो प्रष्ट छैन’ नेता गुरुङले रातोपाटीसँग भने, ‘विपक्षीको समर्थनमा हो भने विचार गर्ने ठाउँ रह्यो, सत्ता पक्षको हो भने हामीले यसै पनि विरोध गरिरहेकै छौं ।’
सरकार बन्न नसके संसद विघटन – महतो
आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाए प्रतिपक्षमै बस्ने जसपाको निर्णयपछि मुलुक चुनावतिर मोडिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । यसलाई स्वीकार्दै जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भन्छन्, ‘ओलीजीले विश्वासको मत पाउँदै पाउनुहुन्न । सरकारले पहिले विश्वासको मत लिन्छ कि नीति कार्यक्रम ल्याउँछ रु विश्वासको मत पहिला लिनुभयो भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा गइहाल्छ । त्यसपछि नयाँ सरकारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तब सत्ताको खेल सुरु हुन्छ ।’
जसपाले निकासका लागि तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको बताउँदै महतोले सँग भने, ‘हामीसँग तीनवटा विकल्प छन् । हाम्रै नेतृत्वमा बनाउने कुरा छ । राष्ट्रिय सरकार बनाउने कुरा छ । कुनै सरकार बन्न सकेन भने संसद विघटनतर्फ जान्छ । अनि चुनावमा जाने हाम्रो निर्णयको सन्देश हो ।’
महतो अगाडि थप्छन्, ‘संसद विघटन गर्दा जुन सरकार रहन्छ, उसैले चुनाव गराउने हो । संविधानको धारा ७६ (५) मा चुनावी सरकार वा राष्ट्रिय सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । मिलोमतोमा सरकार बनाएर जानुपर्छ ।’